Kooxda Atletico Madrid oo soo saartay bayaan ku saabsan dhaawaca João Félix – Gool FM
(Madrid) 19 Oct 2019. Kooxda Atletico Madrid ayaa war rasmi ah ka soo saartay xaalada dhaawacii soo gaaray xiddigooda reer Portugal ee João Félix inta lagu gudi jiray kulankii maanta ay ku wada ciyaareen kooxda Valencia horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Kooxaha Atletico Madrid iyo Valencia ayaa ku kala baxa barbaro 1-1 ah, kulankooda 9-aad ee horyaalka La Liga ay ku wada ciyaareen garoonka Wanda Metropolitano.
João Félix ayaa dhaawacmay daqiiqadii 80-aad wuxuuna ka baxay garoonka, inkasta ay xilligaas Atletico Madrid sameysay sedexdii badal.
Haddaba war rasmi ah ay soo saartay kooxda Atletico website-keeda ayaa waxay ku sheegay in xiddig reer Portugal ee João Félix uu dhaawac aad u daran ka soo gaaray dhanka canqowga ee lugta midig, sidaas waxaa lagu ogaaday baaritaano horudhac ah ee laacibka lagu sameeyay.
Laacibka ayaa lagu wadaa inuu maro baaritaano caafimaad oo dheeri ah xilliyada soo aadan, si loo xaqiijiyo heerka saxda ah uu gaarsiisan yahay dhaawaca soo gaaray.
Chelsea oo guul dirqi ah kaga gaartay Newcastle United garoonkeeda Stamford Bridge… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Juventus Iyo Bologna ee horyaalka Serie A